फोटोनको नयाँ पिकअप र भ्यान नेपाल आउँदै :: Setopati
फोटोनको नयाँ पिकअप र भ्यान नेपाल आउँदै
नेपालका लागि फोटोन कमर्शियल भेहिकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धिले आफ्नो नयाँ पिकअप टुनल्यान्ड-ई नेपालमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
टुनल्यान्ड-ई सँगै एमएडब्लु वृद्धिले नेपालमै पहिलोपटक १९ सिट क्षमता भएको भ्यु सीएस२ एल पनि सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।
फोटोन नेपाल तुलनात्मक रुपमा नयाँ ब्रान्ड सुनिए पनि कमर्शियल भेहिकल सेग्मेन्टमा यो विश्वकै अग्रणी ब्रान्ड हो।
जर्मन अटोमोबाइल ब्रान्ड डेमलरको ५० प्रतिशत साझेदारी रहेको फोटोन मोटरको संसारकै नं १ इन्जिन निर्माता कमिन्स् र संसारकै नं १ ट्रान्समिसन निर्माता जेडएफसँग पनि पार्टनर्सिप रहेको छ।
नेपाल भित्रन लागेको फोटोन टुनल्यान्ड ईमा २.८ लिटको फोर सिलिन्डर, कमन रेल डिजेल इन्जिन रहेको छ, जसले ३६०० आरपीएममा अधिकतम ११३ बीएसपी र १६०० देखि २४०० आरपीएममा २८० एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ। यो इन्जिनमा टर्बो चार्जर र इन्टरकुलर हुन्छ। फोर बाई फोर क्षमताको यो इन्जिनमा ५ स्पिड ट्रान्समिसन रहेको छ।
फोटोन टुनल्यान्ड ई प्रिमियम डिजाइनको ड्यासबोर्डसहितको डबल क्याब पिकअप हो। यसमा टुनल्यान्डको मस्कुलर ग्रिल र बम्परअगाडि स्टाइलिस ब्ल्याकआउट रहेको छ। साथै यसमा प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, एलईडी डीआरएल र फगलाइट रहेका छन्।
यो डबल क्याबको कार्गो बक्स प्रतिस्पर्धी पिकअपको तुलनामा ठूलो (१.५२ मि. बाई १.५८ मि. बाई ०.४४ मि.) रहेको छ र यसको पेलोड क्यापसिटी एक हजार किलोग्राम रहेको छ। पाँच सिट क्षमताको पिकअपको इन्टेरियर सामान्य तर आकर्षक छ। यो पिकअप ब्ल्याक, मरुन, ग्रे, ब्लु, लाइट ग्रे र ह्वाइट गरी ६ रंगमा उपलब्ध छ।
सस्पेन्सनको कुरा गर्ने हो भने यसमा अगाडि क्वाई स्प्रिङसहितको डबल विशबोन राखिएको छ भने पछाडि शक एब्जोर्बरसहितको लिफ स्प्रिङ राखिएको हुनेछ।
यसका अन्य फिचरहरुमा डुअल एअरब्याग, ईबीडीसहितको एबीएस, इन्टिग्रटेड अडियो सिस्टम, रियर पार्किङ सेन्सर, एअर कन्डिसनर, इलेक्ट्रिक रियर मिरर, २१० एमएम ग्राउन्ड क्लेरेन्स, सन भाइजर आदी छन्।
नेपालका लागि यो पिकअपको मूल्य ५९ लाख ५० हजार कायम गरिएको छ। र यसको प्रतिस्पर्धा इसुजु डीम्याक्स, इसुजु एसक्याब, इसुजु भीक्रस, टाटा जेनन, महिन्द्रा पिकअप, महिन्द्रा स्कोर्पियो एस६सँग हुनेछ।
त्यस्तै, टुनल्यान्डसँगै १९ सिट क्षमताको भ्यान भ्यु सीएस२एल पनि सार्वजनिक हुनेछ। २.८ लिटरको शक्तिशाली कमन्सिको डिजेल इन्जिनले अधिकतम ११० किलोवाट पावर र ३३० एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ। यसमा पाँच स्पिडको म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ।
यसमा अटो एसी, टकस्क्रिनसहितको इन्टिग्रेटेड म्युजिक सिस्टम, अनबोर्ड डायग्नोस्टिक टुल, सबै सिटमा हेडरेस्ट, सिट बेल्ट हुनुका साथै अन्तिम सिट फोल्डेबल पनि हुनेछ।
यसको मूल्य ७२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। नेपालमा यसको सिधा प्रतिस्पर्धा कसैसँग नभए पनि टोयोटाको हायस, निसानको अर्वानसँग यसको अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुनेछ।